Tanjona ny ahafahana mampahafantatra ireo entana vaovao sy hanakaiky kokoa amin’ny mpanjifa. Noho ny fahamoran’ny entana dia nahasarika ireo mpitsidika maro tokoa ny ketrika.com. Maro ny liana, indrindra rehefa nahita fa sady marika tena izy ny entana amidy. Ankoatra ny kojakojana fiara, ny fanatsarana endrika sy ny lamaody maro dia misy ny tolotra tena Vita Malagasy, indrindra amin’izao akatoky ny fetin’ny ray izao. Anisan’ireo mpandray anjara vaovao eo amin’ny tranohevan’ny Vondron’ireo Vehivavy Mpandraharaha eto Madagasikara (GFEM) ny Ketrika.com.
Nanintona ny maro ny tranohevan’ny www.ketrika.com teny Ivato